Powdered mmanya njikere see US na-echekwa - News Ọchịchị
Powdered mmanya njikere see US na-echekwa
Dị nnọọ tinye na mmiri na ibido. A US ụlọ ọrụ na-ekwu ya ọhụrụ powdered mmanya ngwaahịa e mma site US regulators na adịla njikere see-echekwa na-abịa ọnwa.
Palcohol a mere ihe Arizona ụlọ ọrụ na-akpọ Lipsmark na ga na-abịa isii iche otu-ọṅuṅu pouches, ụlọ ọrụ website ekwu.
Aṅụ nwere ike ịkpali ndị dị mfe mmiri a shot nke rọm ma ọ bụ vodka, tinye cola ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ oroma maka a igwekota ma ọ bụ mepụta a mmanya — ma a cosmopolitan, Mojito, Margarita ma ọ bụ lemon dobe.
The ụlọ ọrụ kwuru na ọ tụghị anya site na-adịbeghị anya ntọhapụ nke ụfọdụ n'ime ya kpọọ site mmanya na sịga Tax na Trade Bureau, nke “n'ezie mma ya ụfọdụ oge gara aga.”
The ụlọ ọrụ kwuru na ngwaahịa ga-eresị ndị iwu ịṅụ ihe ọṅụṅụ na afọ na a pụkwara ọbụna fesa on nri.
“Na-eche nke Palcohol dị ka mmanya… dị nnọọ ke ntụ ntụ ụdị. Ọ ga-eresị n'ebe ọ bụla ebe-aba n'anya pụrụ ire,” kwuru na ụlọ ọrụ, agbakwunye ọ ga-abụ dị na United States, nakwa dị ka mba ndị ọzọ na online.
A patent maka ngwakọta bụ rue mgbe.
Omume n'ji ase banyere ma ngwaahịa nwere ike snorted, na ụlọ ọrụ kwuru na Askers ka “goofballs” na kwuru na ọ ga-ewe ọkara cup of powder nha anya otu iko mmanya.
“Ị gaghị eme ya! Ọ bụghị a ọrụ ma ọ bụ smart ụzọ iji ngwaahịa,” ọ gbara ume,.
Powdered mmanya esesịn e mma maka ire ere ke Japan na ụfọdụ mba Europe.
Akụkọ a, Powdered mmanya njikere see US na-echekwa , na-syndicated si AFP na-ezitere ebe a na ikike. Copyright 2014 AFP. Ikike niile echekwabara
Iri anọ merụrụ ahụ dị ka ụgbọ oloko ikukota ke Switzerland
Super typhoon whips Philippines, Taiwan, isi maka ...
Ee ekpughe ya iPhone 5S ịnye ọnụahịa
15715	0 Arizona, -aba n'Anya, -ekwo ekwo, ọṅụṅụ, Legal mmanya afọ, Margarita, Mojito, United States
← Britain nwa Prince George ẹyak Australian zoo Erughị ala na Everest isi mara ụlọikwuu n'elu sherpa iku iyi egwu →